पहिले नै धेरै sausages खतराहरूबारे भने गरिएको छ, तर हामी अझै पनि उनलाई किन्न जारी। यो तपाईं एक पैन मा एक ससेज राख्नु र एक मा खाना पकाउने, एक कचौरा तयार चाउचाउ मा फेंक भने, खाने पाँच मिनेट खाना पकाउनु गर्न सक्नुहुन्छ, स्वादिष्ट र छिटो छ "पानी उम्लिरहेको को थकित।" यसलाई कच्चा ससेज खान सम्भव छ? प्रश्न, को पाठ्यक्रम, रोचक। तर जवाफ प्रश्न उत्पादन कस्तो निर्भर गर्दछ। यदि एक प्राकृतिक ससेज, को पाठ्यक्रम 60% शुद्ध, दूध, घिउ र मसलाहरु संग मासु त जसमा, सम्भव। यो प्रयोगको लागि तयार छ र पकाएको ससेज फरक छैन कि एक उत्पादन हो। डायटेटिक्स व्यवसायीक को क्षेत्र मा छोराछोरीको पोषण लागि उपचार हीट subjected मात्र प्रयोग उत्पादनहरु सल्लाह हुनत।
तर हामी के हरेक दिन, नियमित सामना संग आदर्श बारेमा कुरा गर्दै छन्, तर कसरी। म सुपरमार्केट देखि कच्चा ससेज खान सक्नुहुन्छ? यो प्रश्नको जवाफ, गरेको पनि संरचना हेरौं। बरु भराई यो सामान्यतया तार र milled हो छाला, सोया र गहुँ प्रोटिन, फाइबर र सूजी, दूध प्रोटिन र स्टार्च, साथै पानी ठूलो राशि, स्वाद enhancers र thickeners, स्वाद र अन्य "जीवनको मोजमस्ती" समावेश को। मासु 10% भन्दा छैन, र हामी बाकस बाट सस्तो sausages विचार र यहाँ भने छैन। सहमत, हामी कच्चा ससेज हुन सक्छ कि को प्रश्न फरक परिभाषित गर्न सकिन्छ। यसलाई कुनै पनि लायक छैन।
Decoction soaking =
लगभग त यो हामी कम लागत उत्पादन विचार भने, बाहिर जान्छ। रंजक र लवण को भाग उम्लिरहेको बेला पानी प्रवेश गर्छ। त्यस्तै बोसो संग मामला छ। पानी तयार भएको कुकुर पछि कस्तो देखिन्छ, ध्यान दिनुहोस्। यो धेरै, तेल नूनिलो र गुलाबी छ। छ, यो कल्पित गर्न सकिन्छ उत्पादन थप "उपयोगी" भएको छ कि। म कच्चा ससेज, त्यसैले धेरै additives संग भरी खान सक्छन्, - निर्णय।
यो निर्माण को मिति र जो प्याकेजिङ्ग मा पाउन सकिन्छ भण्डारण अधिकतम अवधि छ। को यो अवधि छोटो, राम्रो। यो कि निर्माता छैन परिरक्षकों को एक ठूलो रकम मा उत्पादन राख्नु भएको छ हो। यो नै जानकारी तपाईं कच्चा तातो कुकुर खाने सक्नुहुन्छ कि बुझ्न अनुमति दिन्छ। को sausages हिजो मात्र निर्मित छ भने, त्यसपछि कुनै हानि गर्दैनन्। को संरचना कम्तिमा उपयोगी कुरा अस्तित्व सुझाव दिने प्रदान। उनीहरूले लामो समयसम्म थिए गरे भनेर हेर्न भने, तपाईं निश्चित पकाउन गर्नुपर्छ, र अब।
यो सम्बन्धित अर्को विन्दु हो। यसलाई आधुनिक स्टोर र सुपरमार्केट मा सर्तहरू अवरोध कुनै गोप्य छ। तसर्थ, चाहे त्यहाँ कच्चा sausages हुन सक्छ बारेमा बोल्ने, हामी poostorozhnichat सिफारिस हुनेछ। तपाईं लाभ को पछि लाग्नुलाई के आधुनिक विक्रेता कहिल्यै थाहा छ।
फेरि, हामी खर्च मुद्रा लिनका लागि खेद थियो कि अझै पनि दोकान मा उत्पादन, मूल्याङ्कन गर्न प्रस्ताव। म एक उज्ज्वल रातो वा धेरै गाढा रंग, धूम्रपान मासु बलियो गन्ध छ जो कच्चा sausages, खान सक्नुहुन्छ? एक unambiguous जवाब छैन - पकाउने समय मा, तिनीहरूले रंग कम्तिमा भाग को प्राप्त छुटकारा हुनेछ। तर यो सबै यो उत्पादन नत्याग्ने उचित छ। राम्रो ससेज तरल धुवाँ को वाहेक एक परिणाम हो जो फिक्का गुलाबी, homogeneous, मसला को पनि निकला खुशबू र विशेष गरी धूम्रपान बिना हुनुपर्छ।
को ससेज मासु को संरचना
तपाईं आफ्नो पानी हालियो, वा पैन देखि हटाउने पछि अघि हामी ससेज अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो उत्पादन, पूर्ण यसको आकार धारण यो मासु कम्तिमा आधा हुन्छन् किनभने, बाक्लो र समान छ। sausages र wieners सोभियत पटक सम्झना? तिनीहरूलाई फुट्छ, तर तिनीहरूले पैन मा अलग गिर छैन बोक्रा। आज के भइरहेको छ? उत्पादन swells, छाला विश्रामहरू र ससेज खाना पकाउने गर्दा नै अलग पतन जो जब तपाईं यो एक प्लेट मा प्राप्त गर्न प्रयास एक जेली, मा उत्तेजित गर्दछ। त्यो स्टार्च, बोसो को एक विशाल मात्रा र खाल को सबै vyvarok एक भाग हो। आमाबाबुले गर्न प्रश्न - म खाता आधुनिक वास्तविकताहरुमा लिएर, बच्चाहरु को लागि कच्चा तातो कुकुर खाने गर्न सक्नुहुन्छ।
म्यान: प्राकृतिक वा कृत्रिम
यो गर्मी उपचार धेरै ससेज कसरी सामना गर्नेछ निर्धारण गर्नेछ। प्राकृतिक खोल खाना पकाउन र grilling र ग्रिल मा बरस रही withstands। आज, सबै भन्दा निर्माताहरु को sausages प्राकृतिक केसिङ मा पैक कि प्याकेज मा संकेत गर्छ। तर यो पैन मा खण्डन भने, त्यसपछि प्राकृतिक केही छैन यो छ। खैर, तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यो सम्भव, प्राकृतिक केसिङ मा कच्चा sausages खान सम्झना छ कि 72 घण्टा उत्पादन को आफ्नो जीवन। तपाईं विक्रेता यो समयमा पूर्ण उत्पादन महसुस गर्न समय छ भनी निश्चित हुनुहुन्छ? कृत्रिम प्याकेजिङ्ग उत्पादन थप लाभ बनाउँछ, तर पकाउने प्रक्रियामा तापमान को प्रभाव अन्तर्गत खण्डन।
कसरी खाना पकाउनु
सिद्धान्त मा, सबै sausages पहिले नै तयार छन्। तिनीहरूले न्यानो र बिस्तारै जीवाणु रहित बनाउनु मात्र आवश्यक छ। Nutritionists तपाईं पानी जोश र यो sausages राख्न आवश्यक भन्छन्। तीन मिनेटमा तपाईं प्राप्त र खान सक्छ। तर, हामी सोभियत सारा महाराज को अनुभव मा हेर्न भने, त्यसपछि हामी लाभ अन्य सबै संख्याले मा नामित थिए सिक्न। त्यहाँ कच्चा sausages र sausages हुन सक्छ कि मा, त्यहाँ केही भने थियो छ। 5-10 मिनेट लागि पातलो सिफारिस उत्पादन उसिनेर। पोटिलो sausages पनि अब, 10-15 मिनेट को लागि आवश्यक थर्मल उपचार गर्न subjected। उबला वा तला, यो मसले आलु र हरियो मटर संग सेवा गर्न सिफारिस गरिएको थियो। तर nutritionists यसलाई कम-क्यालोरी खाना, बन्दागोभी र अन्य तरकारी प्रस्ताव राम्रो छ भन्छन्।
स्वास्थ्यप्रद कुकुर खाना पकाउने
तपाईं आधुनिक उद्योग प्रदान गर्दछ जो उत्पादन, मा निराश छन् भने, आत्म-खानपान स्वादिष्ट sausages त्यसपछि आनन्द। के यो राम्रो मासु किन्न र ध्यानपूर्वक एक ब्लेंडर मा पिस्नु आवश्यक हुनेछ। यो वजन दूध संग पतला हुनुपर्छ पछि, मसाले र घिउ थप्न। को स्थिरता एकदम नाजुक हुनुपर्छ, त्यसैले यसलाई tastier हुनेछ।
अब तपाईं अपलोड धेरै आवश्यक हुनेछ जो, ससेज र खोल लागि चुच्चो विशेष Grinder आवश्यक छ। किनारा ध्यान बाँध र एक सानो झूट तल भराई गर्न फ्रिज मा पठाउनुहोस्। यसलाई अब उत्पादन खाना पकाउनु रहनेछ। यो पैन र पानी हालिएको छ यो sausages overfill। हामी जोश नभएसम्म प्रतिक्षा गर्नुहोस् र 15-20 मिनेट पकाउन। अब हामी हाम्रो अचम्मको sausages प्राप्त र कुनै पनि पक्ष पकवान संग सेवा गर्छन्। सोध्न अनावश्यक, पकाउने, बिना एक हट डग कच्चा छ यो सम्भव छ। यस मामला मा, गर्मी उपचार बिना गर्दैन। सोही यी sausages पकाएको र पाक्नु गर्न सकिन्छ। प्रत्येक समय सुगन्ध र स्वाद शानदार छ।
sausages को Dietitians
आज बजार मा उत्पादनहरु गुणस्तर कमजोर छ। तसर्थ, शिशु, गर्भवती र lactating महिला राम्रो छ पूर्ण आहार देखि यस्तो उत्पादनहरु निकाल्न। अध्ययन देखाउन एउटा भारी पनीर मा, पनि कुनै राम्रो शरीर दिन छैन उसिनेर हुनत जो, बोसो sausages र हानिकारक additives को राशि को एक भाग।
तपाईं ससेज बच्चा को एक किसिम दिन निर्णय भने, सम्झना छ कि यो छैन पहिले तीन वर्ष मा गर्न सकिन्छ बच्चा को आहार। ब्रान्ड ध्यान चयन गर्नुहोस्। छैन सस्ता तातो कुकुर ध्यान गर्छन्, तिनीहरूले धेरै हानिकारक additives छन्। तर सबैभन्दा महंगा लिन कुनै आवश्यकता छ। सामान्यतया, तिनीहरूलाई को संरचना मध्य-मूल्य खण्ड मा जस्तै हो, तर धेरै उच्च लागत मा। किन ट्रेडमार्क लागि overpay? बिग्रेको उत्पादन शीर्ष-अन्त मूल्यहरु मा कहिले काँही र खुल्लमखुल्ला बेचे। यस मामला मा, निर्माता यो उपभोक्ता बहुमूल्य गुणस्तर ठान्नुहुन्छ के गर्न चाहनुहुन्छ।
दुई निष्कर्ष आज गर्न सकिन्छ। पहिलो - त्यहाँ कच्चा ससेज सिफारिस छ। यो उसिनेर ससेज उपचार गर्मी यसलाई अधीनमा धेरै सुरक्षित छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद। दोस्रो - खान आधुनिक पसल ससेज सबै सिफारिस गरिएको छैन। धेरै राम्रो घर sausages को निर्माण मा संलग्न। ग्रील्ड, तिनीहरूले तपाईंलाई बजार मा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ के भन्दा धेरै tastier छन्। यो तपाईंलाई नुन र मसला को राशि समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ, र भित्र के मासु ठ्याक्कै थाहा हुनेछ।
को रोल्ड जई को दलिया फरक छ? को दलिया "Uvelka" बाट "हर्कुलेसक्लस्टर" के distinguishes?
लाभ र बगैचा डुब्नु को हानि
घर मा अनाज कसरी फलिफाप गर्न? हरियो अनाज कसरी अङ्कुराउन
टर्बो खमीर रक्सी: समीक्षा, निर्देशन
अद्वितीय GRS कस्मेटिक्स: उपभोक्ता समीक्षा
कार Yaz-210: फोटो
बेडरूम मा प्रकाश कसरी चयन गर्न
संग्रह क्रेडिट संग्रह एजेन्सीहरू
बी भिटामिन: भिटामिन बी 1 र अन्य
बारम्बार पार्ट्स जोड दिंदै अब सुरक्षित छ!
आनन्द लामो सडक। यो श्रृंखला "जीवन को एक गवाही रूपमा आशा।" अभिनेताहरु, वर्णहरू, एक कठिन प्रेमको कहानी
पाइन तन्तु। आवेदन धेरै रोगहरु को छुटकारा मदत गर्नेछ प्राप्त
कम्प्युटर विकास इतिहास: कुञ्जी कोशेढुङ्गामा।